တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေကတော့ FBSအကူအညီနဲ့ အကောင်အထည်ပေါ်လာတော့မှာပါ! သင့်အိပ်မက်တွေလဲ တကယ်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်! ရှက်မနေပါနဲ့. သင့်နှလုံးသားကတောင်းဆိုတဲ့အရာကို ပြောပြလိုက်ပါ. ဒါပေမယ့် သတိရပေးရမှာကတော့ " ပိုက်ဆံတွေ ဖုန်းတွေလိုချင်တယ်လို့ ပြောမယ့်အစား တကယ့်ကို စိတ်လှုပ်ရှား ကြည်နူးခံစားဖွယ်ရာတစ်ခုခုကိုသာ တောင်းဆိုပါ". တစ်လအတွက် စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေ တောင်းဆိုမှုတွေအကုန်လုံးနဲ့ စာရင်းလုပ်ပြီး အကောင်းဆုံး စိတ်ကူးအိပ်မက်တစ်ခုစီကို ရွေးချယ်ပြီး လစဉ် ကူညီ ဖြည်ဆည်းပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်. ဆုရှင်ဖြစ်လာအောင် ဆန်းသစ်တဲ့စိတ်ကူးလေးတွေ အတွေးအမြင် ခံစားချက်လေးတွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ ဖွဲ့ဖွဲ့နွဲ့နွဲ့ပြောပြလိုက်ပါ.